MAX Optimizer အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » MAX Optimizer- အာကာသ Cleaner, Antivirus ကို & Booster
MAX Optimizer- အာကာသ Cleaner, Antivirus ကို & Booster APK ကို
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX, ဖုန်းမြန်နှုန်း Booster အခမဲ့ Antivirus ကို, Junk Cleaner, ဗိုင်းရပ်စ် Cleaner, CPU ကို Cooler, ဘက်ထရီချွေတာခြင်းနှင့် App ကိုကက်ရှ်သန့်စင်နှင့်အတူအာဏာအရှိဆုံးက Android မိုဘိုင်းသန့်စင် app ကို။ သငျသညျ Android ဖုန်းပိုကောင်းအောင် -! MAX ဖုန်းမန်နေဂျာ - သန့်ရှင်း Junk ဖိုင်များကိုအမျိုးအစားအားဖြင့်, ငါ့ဟာ android ဖုန်းပေါ်မှာနေရာလွတ်! -
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကိုဗိုင်းရပ်စ် detector, ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး remover နှင့်အတူထုပ်ပိုးဟာ android များအတွက် MAX, အကောင်းဆုံး android မိုဘိုင်းသန့်စင်ခြင်းနှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်, ဖုန်းသန့်စင်နှင့် antivirus ကို apps-! သင့်ရဲ့ Android မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် laggy ရယူခြင်း? စင်ကြယ်သော & antivirus ဆော့ဖ်ဝဲဟာ android များအတွက် MAX သန့်စင်, android ဖုန်း booster ကတော့ junk ရယူပါ!
virus Cleaner - android ဖုန်းများအတွက် Antivirus ကိုအခမဲ့ antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်, ဖုန်းအရှိန်မြှင့်, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို clean up, သန့်ရှင်း Junk ဖိုင်များကို, CPU ကိုနှိမ့်ချအအေး, မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းအောင်, ဘက်ထရီပါဝါကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကယ်တင်နှင့်သိုးထီးတကောင်ကိုတက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို 2018 - MAX, အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသန့်စင် apps များ!
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအင်္ဂါရပ်များ:
မိုဘိုင်းသန့်စင် app ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်သန့်ရှင်းသော Junk ဖိုင်များကို, ငါ့ဟာ android clean ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးက App Cache သန့်စင်။ , Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းနေရာလွတ်, သိုးထီးတကောင်ကိုတက်လွတ်မြောက်နှင့်ဖုန်းမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုမှာကိုထိပုတ်ပါ။ စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX, အကောင်းဆုံးဖုန်းကိုသန့်စင်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်အာနိသင်တိုးမြှင့် app တစ်ခု။
- တစ်ဦးကိုအသာပုတ် Booster
MAX Booster သန့်ရှင်းနောက်ခံမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာသိုလှောင်မှုနေရာလွတ်နှင့်ဖုန်းအရှိန်မြှင့်ရန်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက် apps ။
- ဖုန်းလုံခြုံရေး (Android အတွက် Antivirus ကို)
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကာကွယ်ပါ။ virus Cleaner - MAX Antivirus ကို, android ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးတဦး။
အနီးကပ်အပူဖုန်းကိုချအအေး apps ။ ဘက်ထရီသက်တမ်းအချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းပါ။
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX, အန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး Optimizer:
junk ဖိုင်တွေကို Cleaner
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် Junk ဖိုင်များကို (စနစ်နှင့် app ကို cache ကို, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေ) scan ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ App ကို cache ကိုသန့်စင်သိုလှောင်မှုတက်လွတ်မြောက်နှင့်ဖုန်းစွမ်းဆောင်မှုပိုကောင်းအောင် Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
မြန်နှုန်း Up ကိုမြှင့်တင်ရန်
Android ဖုန်း၏သိုးထီးတကောင်ကိုတက် Free Android နှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်နှင့်အတူဘက်ထရီကိုကယ်တင်: စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX ။ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ 1-ကိုထိပုတ်ပါအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြတ်လမ်းကိုဖန်တီးပါ။ MAX Booster သင့်ရဲ့ဖုန်းကို clean up ။
မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး & Free Antivirus
AVTEST အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြု #1 အင်ဂျင်နှင့်အတူ MAX လုံခြုံရေး antivirus ကို app ကို (android များအတွက်ဗိုင်းရပ်စ် remover) တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အလိုအလျှောက်လုံခြုံရေး app တစ်ခုအဖြစ် malware များအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ အဆိုပါ Auto-updated antivirus ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်သင့်မိုဘိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုလုံလုံခြုံခြုံ။
virus Cleaner - MAX Antivirus ကိုသည် dynamically CPU အသုံးပြုမှုကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, အပူ app များကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်, ချက်ခြင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချအအေးသူတို့ကိုပိတ်။
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဘက်ထရီ
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX ဘက်ထရီ status ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဘက်ထရီကယ်ဖို့ဘက်ထရီဖျန် apps များရပ်တန့်, ဘက်ထရီတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX စကားအမလိုချင်တဲ့ app ကိုအကြောင်းကြားစာများနှင့် App ကိုစည်းရုံးရေးမှူး၌ထားတော်မူ၏။
အားလုံး Apps ကပကိုစီမံခန့်ခွဲ
စူပါ Antivirus ကို Cleaner, Antivirus ကို - MAX ဦးတည်းကလစ်အတွက်မျိုးစုံ apps များ uninstall ရှားပါးအသုံး app ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ MAX လည်း APK ကိုဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးသည်။
Antivirus ကို, စူပါ Antivirus ကို Cleaner မှာပိုထွက်ရှာပါ - MAX!
Google+ မှာ: plus.google.com/communities/110565006562398668227
- နယူးဗိုင်းရပ်စ်အင်ဂျင်! ကိုအလွန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မြန်နှုန်းတိုးတက်စေ!
- နယူးခေါ်ရန်လက်ထောက် Avaliable! မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့!
MAX Optimizer- အာကာသ Cleaner, Antivirus ကို & Booster
9.75 ကို MB
ONE App ကို, Ltd.